Ilebula Sticker, Isipho Box, Paper Isitoreji Ibhokisi - Huaguang
Ukuhlinzeka amakhasimende ngensizakalo enhle nemikhiqizo esezingeni eliphakeme. Imizamo, eyakhayo, eye phezulu, eyokuzizuzela wena, ukubambisana ngokuwina.
Custom logo umbala wokunyathelisa ikhofi 350g c emhlophe ...
Ukupakisha ibhokisi lekhadi kusetshenziswa kabanzi. Isibonelo, embonini yokudla, kunamabhokisi amakhadi ekhofi, amabhokisi amakhadi amaswidi, amabhokisi ekhadi lamakhukhi njalonjalo. Imboni yezobuhle ingaphezulu, njengebhokisi lamakhadi e-lipstick, ibhokisi lekhadi lesifihla, ibhokisi lekhadi le-toner njalonjalo; Kukhona nemboni yezicathulo nezingubo, njengamasokisi, izingubo, izingubo zangaphansi nokunye. Uma kuqhathaniswa nebhokisi lesipho, ibhokisi lekhadi lishibhile, futhi ibhokisi lekhadi lingasongwa, okusindisa kakhulu izindleko zokuhamba. Futhi ibhokisi lamakhadi lifana nesipho ...
Skin ukunakekelwa iphepha ibhokisi ufaka nge PVC incwadi typ ...
Ngokuthuthuka nokuvuselelwa kobuchwepheshe nemishini, inqubo yokukhiqiza yokupakisha ibhokisi lesipho iye yenziwa ngamabhizinisi amaningi. Ukusetshenziswa kobuchwepheshe obusha kuthuthukise kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqiza, futhi imishini emisha iye yathatha isikhundla sokusebenza ngesandla okuyisidina. Ukuthuthukiswa kwesoftware ne-hardware kuthuthukise ikhwalithi yomkhiqizo. Uhlobo lwebhokisi lesipho lazo zonke izinhlobo, kusukela kumaphoyinti akhomba phezulu naphansi ngokuhlanganiswa kwesembozo nefomu lekhava eyisisekelo, em ...
Ibhokisi lefayela likamagazini elinamakhasi lingelinye lamabhokisi amaningi wamafayela. Ibhokisi elivulekile elisetshenziswa kakhulu ngabasebenzi basehhovisi ukugcina nokuhlukanisa. Kulula ukugcina nokuthatha amafayela. Imvamisa kunemibhalo eminingi ehhovisi. Ezinye zazo zibalulekile futhi zisetshenziswa njalo. Kukhona izinkomba, okukhulunywa ngazo ngezikhathi ezithile; Ezinye azidingeki kaningi futhi zivame ukuhlala zingenzi lutho. Uma yonke le mibhalo ihlanganiswa, iyahleleka futhi akulula ukuthi siyibheke. Yilapho i-rack rack co ...
Ibhokisi eliphethe into, okungukuthi i-thing (abaningi bakhomba i-athikili encane, lifana nokuthi: okubhaliwe kwehhovisi, izimonyo, idatha yefayela, ithuluzi elincane, amasokisi, izikhindi zangaphansi njll.) Ukuqoqa ndawonye, ​​njengoba negama lisho ukuthi isitoreji sokubiza ibhokisi. Amabhokisi wesitoreji, aziwa nangokuthi amabhokisi ezinto zasendulo, abesetshenziswa amaqembu amaqembu emivubukulo ezinsukwini zokuqala ukugcina izingcezu ezivunjiwe nezihleliwe zezinto ezingamasiko. Lawa mabhokisi ngokuvamile abhalwe ngokuqinile, amanye makhulu futhi amanye amancane, kepha iningi lingusayizi webhokisi lezicathulo (ukuvula ...
Ukuphrinta, kuyinhlobonhlobo yemikhiqizo ephrintiwe, cishe egcwele izingubo zabantu, ukudla, izindlu, ukuhamba emkhakheni, futhi impilo yabantu isondele kakhulu. Yini isilinganiso seqoqo lezingxenye ezibukhoma? Akugcini nje ngokubona ukuthi umbala wokuphrinta uyahambisana yini nezidingo, kepha futhi nokubona ukuthi ngabe leliqoqo likayinki obukhoma lizinzile yini. Namuhla, Ngokususelwa kuleli bhokisi lesipho, ngithanda ukwabelana nawe ngezinto eziningana ezinomthelela ekuzinzeni kombala weyinki: Umphumela obonakalayo wenki ...
Custom logo Ezenziwe Ngesandla elibizayo Paper Ubucwebe Ibhokisi O ...
Ukwenziwa nokukhiqizwa kwamabhokisi wobucwebe kususelwa ekwakhiweni kobucwebe. Ingaphakathi livamise ukwakhiwa ngezikhala eziningi ukuvimbela imihuzuko engadingekile ebangelwe ukuthintana nobucwebe. Amanye amabhokisi wobucwebe ayahlukahluka ngesakhiwo sangaphakathi ngokuya kobujamo obukhethekile nezinto zokwakha. Ukusetshenziswa okuyinhloko kwebhokisi lobucwebe, ukuze kugcinwe ubucwebe buhlala njengomphumela omusha wokubukeka, ukuvimbela uthuli nezinhlayiya ezisemoyeni ekubukekeni kobuso bezinto zokuhloba nokugqoka, futhi kunikeze nabaqoqi bezinto zokuhloba ...
Leli phepha lesikhwama lisetshenziselwa ukugoqa izipho zezingane noma ukuhlela amathoyizi amancane ezingane. Ithoni yalo eyinhloko iluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe, ukwakheka kwephethini lamachashaza egagasi, kubukeka kuhlanzekile, kukhululekile futhi kuhle, kulungele izingane. Futhi ukufaniswa kombala okunjalo, angikwazi ukuzibamba kodwa ngifuna ukusebenzisa leli phepha lokuphatha ipotimende, kulezi zinto ezingenhla ezithinta ukuguqulwa kombala kwento ephrintiwe. Phrinta kunqubo yokuphrinta nokugcina, i-hue yayo, ukukhanya, ukugcwaliswa kaningi kuyashintsha, ...
Kwenziwe ngentando Round ukuma ibhokisi isipho nge qual ...
Umklamo wokupakisha wukuhlola okusebenzayo komhlaba okunomqondo wokubuka njengesikhungo nezinye izinzwa ezine njengomsizi. Empilweni, impahla ngayinye ivuselela kakhulu izinzwa zabantu ngezindlela ezahlukahlukene, kubangele isifiso sokuthenga. Kungashiwo ukuthi ukuthandeka kokupakisha kungumphakathi wanamuhla usebenzisa "izinzwa ezinhlanu" izindlela zokukhangisa ezikhangayo. Namuhla, ake sikhulume ngomklamo wokupakisha ngaleli bhokisi lesipho eliyindilinga: Umbono uyisikhungo sobuciko ...
I-Takeaway: okungukuthi khetha izinto zokupakisha ezifanele, ukwakheka kokupakisha ngobuchwepheshe obuhlakaniphile, ukupakisha izimpahla zemodeli yesakhiwo sesitsha nokwenza ubuhle bomklamo wokuhlobisa ukupakisha, kuye kumbala wokupakisha, umumo, okokusebenza nokunye konke ulimi, lunikeza impahla impahla ehlukile, kepha futhi nokusungulwa kwesithombe esiphelele sento, njengoba imfuneko yabathengi yahlulela ikhwalithi kakolweni kumakhoba, sha ...
Kunezitayela eziningi zezimbali, sizobanika zona abantu abahlukahlukene ngokuya ngezinhlobo ezahlukahlukene, ziveze incazelo ehlukile. Noma ukuqonda kwezimbali kungajule kakhulu, abantu besimanje ngokuyisisekelo bayazi ukuthumela ama-roses kubathandi, ama-carnation kubadala, neminduze kubangani. Kukhona isixha, ibhasikidi lesandla, ishelufu lebhasikidi, ukufakwa kwebhokisi lembali, ngalinye linendima ehlukile nomphumela. Isibonelo, kimi, ngingathanda ukuthola isixha sezimbali ngoSuku Lwezithandani, okuyi-v ...
Sijwayele ukubeka izingubo zethu zangaphansi noma amasokisi ekhabetheni, kepha kulula ukuzimosha. Amabhokisi wesitoreji kulula ukuwahlela, kulula ukuwahlela, futhi kuhlanzeke kakhulu ukugcina izingubo zangaphansi namasokisi ehlukene. Kodwa-ke ibhokisi lokugcina iphepha emakethe ligcwele izinto ezinhle emehlweni, khetha ibhokisi elifanele impela libaluleke kakhulu, ngaphandle kwalokho kungenzeka lingasizi, noma lingazinzile nakakhulu.Ikakhulukazi uma unomndeni omkhulu, kuzoba nokuningi izingubo ezidinga amabhokisi okugcina iphepha. Yiba ...
Ukunyathela okushisayo oku-ntathu kuyinhlanganisela yomphumela wokucindezela i-bump nokushaya okushisayo, okunomphumela omuhle wokulwa nomgunyathi nomphumela wobuciko, ngakho-ke isetshenziswe kabanzi. Kepha ukulawulwa kwekhwalithi yesitembu esishisayo esinamacala amathathu kuyinkinga eyinkimbinkimbi ngokuqhathaniswa. Leli phepha liyehla kancane ...
Yini oyaziyo ngokufakwa okuphezulu kwebhokisi lesipho?
Mayelana nencazelo yebhokisi lezipho ezisezingeni eliphakeme, noma ngabe usesho lweGoogle, nalo alunazo izincazelo eziqondile, futhi nencazelo yomuntu ngamunye yehlukile, le ndatshana ixoxe ngebhokisi lezipho eliphakeme, ikakhulukazi lebhokisi lokunamathisela, elidinga inqubo eningi , futhi udinga ibhokisi lokunamathisela elenziwe ngesandla, okuqukethwe f ...
Ukupakisha Ulwazi Lolwazi: Qonda Izici Zephepha, Thuthukisa Ikhwalithi Yokupakisha nokuphrinta
Abstract: Iphepha liyizinto ezisetshenziswa kakhulu ukuphrinta kokufaka. Izici zayo ezibonakalayo zinomthelela oqondile noma ongaqondile kwikhwalithi yokuphrinta. Ukulungisa okulungile nokuqonda ubunjalo bephepha, ngokuya ngezimpawu zomkhiqizo, ukusetshenziswa kwephepha okufanelekile ukwenza ngcono ...